अधिकांश एसईओ उद्योग पछाडि छ Martech Zone
अधिकांश एसईओ उद्योग पछाडि छ
मङ्गलबार, अप्रिल 3, 2012 सोमवार, जुन 10, 2013 Douglas Karr
म अहिले वेबिनार सुन्दै छु खोज इन्जिन अनुकूलन (SEO) र यसले मलाई चिढचिढ्यायो। वेबिनारमा छलफल गरिएको पहिलो मेट्रिकको चर्चा हो कति लिंकहरू एक रणनीति उत्पादन, र कुञ्जी शब्दहरूको भोल्यूमहरू रणनीति मा तैनात थिए कि।
कुनै छलफल छैन रूपान्तरण। कुनै छलफल छैन प्रासंगिकता। कुनै छलफल छैन दर्शक। कुनै छलफल छैन पदोन्नति। छलफल सरल तरिकाले तपाईं कसरी त्यहाँ क्र्याप फ्याक गर्न सक्नुहुन्छ र धेरै अत्यधिक प्रतिस्पर्धी कुञ्जी शब्दहरूमा रैंक अप ड्राइभ गर्न कुनै पनि स्रोतबाट धेरै लि get्क प्राप्त गर्न को लागी प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। किन तपाईं कसैको बटमा तपाईंको लोगो ट्याटु गर्नुहुन्छ र यसलाई यूट्यूबमा फाल्नुहुन्न? तपाईं त्यसरी नै अप्रासंगिक यातायातको धेरै प्राप्त गर्नुहुनेछ, र यो सायद कम खर्च हुनेछ।
हामी डिजिटल मार्केटि inमा अहिले सम्म पुगेका छौं तर हामी जहिले पनि बकवास युक्तिहरूमा फर्कन्छौं। को पुरानो रणनीति थप नेत्रगोल बजारहरूलाई प्लेग गर्न जारी राख्छ। मिथक यो हो कि तपाइँ सबैलाई तपाइँको साइटमा आकर्षित गर्नुपर्दछ ... र त्यस समूह भित्र तपाइँले कसैलाई भेट्टाउनुहुनेछ। धेरै भन्दा धेरै हामी रणनीति असफल भएको देख्छौं, तैपनि मार्केटरहरू जहिले पनि यसमा फिर्ता जान्छन्। अधिक नेत्रगोलनाश अधिक व्यापारको पर्यायवाची छ।
यो सत्य होइन। र यसैले कम्पनीहरूले लगानी गर्नु पर्छ SEO मा इनबाउन्ड मार्केटिंग.
म अझै पनि ती व्यक्तिहरूको संख्यामा छक्क छु जसले आफूलाई एसईओ विशेषज्ञहरू बेच्छ तर अनलाइन आगन्तुकहरू कसरी छन् भन्ने पनि मतलब राख्दैनन् ग्राहकहरु मा रूपान्तरण। उनीहरूले ग्राहकलाई बोल्नु अघि उनीहरू स्तर निर्धारण गर्दछन्, सबै उच्च मात्राको कुञ्जी शव्दहरू फेला पार्दछन्, र उनीहरूले कसरी यसको हमला गरिरहेका छन् भनेर उनीहरूलाई महँगो भनाइ उद्धृत गर्नुहोस्। यो डरलाग्दो दृष्टिकोण हो र यो पूर्णतया पछाडि हो।
यदि तपाईं स्थापित ब्रान्ड अनलाइन हुनुहुन्छ भने, तपाईं पहिले नै डेटा छ जहाँ तपाइँको व्यवसाय अनलाइन बाट आउँदै छ। याद गर्नुहोस् मैले भनेन जहाँ तपाइँको यातायात बाट आउँदैछ। मैले भने जहाँ तपाइँको व्यापार बाट आउँदैछ। यसको मतलब यो हो कि तपाईको समीक्षा विश्लेषण घटनाहरू, लक्ष्यहरू र रूपान्तरणहरूको लागि जुन तपाईंको ब्रान्डमा एक सम्भावित नेतृत्व र तिनीहरूलाई ग्राहक बन्न उत्प्रेरित गर्दछ।
धेरै जसो ट्राफिक तपाई पाउनु हुन्छ त्यो खण्डमा छैन ... त्यसोभए किन तपाईलाई ध्यान दिनुहोस् कि तपाईले भ्रमण गर्ने दर्शकहरु लाई भेट्नु हुन्छ जो तपाई संग कहिले व्यापार गर्दैन? निश्चित छ, ती मध्येका केहीले अन्य व्यक्तिसँग तपाईंको जानकारी साझा गर्नेछन् - त्यो उत्तम कुरा हो। तर त्यो मात्र हुन्छ जब तपाईं साझा गर्नुहुन्छ सही दर्शकहरूको साथ प्रासंगिक सामग्री.
यदि तपाईं खोज ईन्जिन अप्टिमाइजेसनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले खोज्नु पर्ने कुञ्जीशब्दहरू पहिचान गरेर शुरू गर्न आवश्यक पर्दछ ड्राइव परिणामहरू ... त्यसपछि पछाडि कार्य गर्नुहोस्। के तपाइँसँग तपाइँको बिक्री चलाउँदै हुनुहुन्छ भनेर सापेक्ष कीवर्डमा मध्यवर्ती रैंकिंग छ? ती कीवर्डहरूको लागि ती पृष्ठहरूलाई अनुकूलन गरेर शुरू गर्नुहोस् ताकि तपाईंको बिक्री बढ्नेछ। सामान्यतया, यी लामो-पुच्छर हुन् र काम गर्न गाह्रो छैन।
अब तपाईं नेत्रगोलकको सट्टा व्यापार परिणामहरू ड्राईभ गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईंको एसईओ प्रयासहरू भुक्तान हुनेछ।
अप्रिल 4, 2012 मा 5: 07 एएम
मेरो विचारमा, कुञ्जीशब्दहरू पहिचान गर्ने उत्तम तरिका जुन Seo मा परिणामहरू निम्त्याउँछ, सजिलो खोजशब्द प्रदर्शनको परीक्षण गर्न र गुगलले कसरी मेरो व्यवसाय अनलाइन राम्रोसँग पहिचान गर्न सक्दछन् सानो गुगल विज्ञापन अभियानको साथ शुरू गर्नु हो। १ महिना पछि तपाईंसँग जैविक परिणामहरूको लागि उत्तम अप्टिमाइजेसन गर्न पर्याप्त डाटा हुन सक्दछ।
अप्रिल 4, 2012 मा 10: 16 एएम
राम्रो तरिका जुन वास्तवमै राम्रो काम गर्दछ! कहिलेकाँही हाम्रा ग्राहकहरूले हामीलाई त्यो विकल्प दिदैनन् - तर हामी तिनीहरूलाई प्रायः त्यसमा कुरा गर्ने कोसिस गर्छौं! तपाईं पीपीसी मार्फत सयौं वा हजारौं संयोजनहरूको परीक्षण गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो थपेकोमा धन्यबाद!